Tsvaga Tsamba: Tsvaga uye Gadza Google Fonts Webhu Fonti Linux Vakapindwa muropa
Tsvaga Tsamba: Tsvaga uye isa Google Fonts webhu mafonti
La kugadzirisa tsika yako Inoenda kubva pane yakapusa theme, icon pack, imwe theme kune yako desktop desktop pakati pevamwe, zvakare ichi chikamu chekugadzirisa inotakurwa pamwe neshanduko yetypeface system, saka isu tine zvakawanda sarudzo dzayo.
Uyewo, iko kushandiswa kwemafonti hakuganhurirwe kushandiswa muhurongwa, zvakare lsezvaungashandisa mumagwaro ako akapfuma mavara, mharidzo, kugadzirisa mifananidzo, vaise mukati mawebhusaiti, pakati pevamwe.
Ndokusaka nguva ino ngatitaurei nezvekushandisa kwakanakisa kuti atitsigire nekutsvaga kwenzvimbo.
Font Tsvaga chikumbiro cheGTK3 yemahara uye yakavhurwa sosi , que yaishandiswa kutsvaga nekuisa nyore mafonti eGoogle mune yedu system kubva kuGoogle fonts faira. Font Tsvaga yakanyorwa muRust programming mutauro.
Kusiyana neTypecatcher, iyo inoshandisa Python, Font Finder unogona kusefa zviwanikwa nezvikamu zvavo, ine zero Python nguva yekumhanya uye ine zvirinani kuita uye kushandisa zviwanikwa.
1 Maitiro ekuisa Font Tsvaga paLinux?
2 Mashandisiro ekushandisa Font Tsvaga?
3 / Ungachinja sei ruvara rwe Font Tsvaga inowanikwa?
4 Maitiro ekubvisa Font Tsvaga?
Maitiro ekuisa Font Tsvaga paLinux?
Si unoda here kuisa iyi application pane yako system, tinogona kuita maitiro nenzira mbiri.
Nzira yekutanga yekuisa Font Tsvaga pane yako system nerubatsiro rwe Ngura, kana uine mutauro uyu waiswa pachikwata chako, chete iwe unofanirwa kuita unotevera kuraira:
cargo install fontfinder
El imwe nzira yekumisikidza iri kushandisa Flatpak, saka unofanirwa kuve nerutsigiro rweizvi mune yako system.
Kuisa Font Tsvaga iwe unongofanirwa kuvhura terminal uye nekuteedzera unotevera kuraira:
Iwe unongofanirwa kumirira zvishoma kuti kumisikidza kuti kupedze. Kana izvi zvaitwa, iwe unogona kuenderera kuvhura iyo application nekuitsvaga mune yako yekunyorera menyu.
Mashandisiro ekushandisa Font Tsvaga?
Isu tinopfuurira kuvhura iyo application, kana iwe usingakwanise kuiwana mune yako application menyu iyo iyo iwe unogona kuvhura neinotevera kuraira:
flatpak run io.github.mmstick.FontFinder
Vhura iyo application vachasangana iyi interface iri nyore uye inonzwisisika. Mune izvi ivo vachaona mafonti eGoogle ese ewebhu akanyorwa pane kuruboshwe, izvo zvavanozokwanisa kusarudza uye kukwanisa kuona nekutenda kufanoona yeiyo inoenderana sosi iri kurudyi repaneru.
Uyewo iko kushanda kune bhokisi kwaunogona kutaipa chero izwi mubhokisi rekutarisa kuti uone kuti mazwi anozoonekwa sei mune yakasarudzwa font.
Kutsvaga font kana uchiziva zita rayo pane furemu tsvaga nechekumusoro kuruboshwe , que inokutendera kutsvaga kurumidza font yaunosarudza.
Nokusingaperi, Font Tsvaga inoratidza ese marudzi emafonti. Nekudaro, iwe unogona kuratidza mafonti nechikamu muchikamu chinodonhedza bhokisi pamusoro pebhokisi rekutsvaga.
Zvino kuita kuisa font pane system neFont Tsvaga, zviri nyore sarudza sosi zvekufarira kwako uye tinya bhatani rekuisa yakawanikwa pamusoro pechikumbiro.
Kuti uone kuti font yakaiswa nenzira kwayo, unogona kuedza chero izwi kugadzirisa application uye utsvage iyo font mune runyorwa rwemafonti akatakurwa.
Pane kupokana, kana tichida kusunungura font, tinogona kuzviita nenzira imwecheteyo, ingosarudza font yaunoda kubvisa mune font font yekuwana uye tinya bhatani rekununura.
/ Ungachinja sei ruvara rwe Font Tsvaga inowanikwa?
Font Tsvaga ine makanda maviri, iyo inouya nekumisikidza ndiyo yakajeka ruvara, asi isu tinogona kuchinja iyi en bhatani rezvisarudzo iyo ine giya chimiro chiri munzvimbo yepamusoro yekona kuruboshwe uye pano ivo vanozogona kuita shanduko kune yakasviba interface.
Maitiro ekubvisa Font Tsvaga?
Kuti uninstall iyo application kubva kune yako system, vhura terminal uye ita unotevera kuraira:
flatpak uninstall io.github.mmstick.FontFinder
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Tsvaga Tsamba: Tsvaga uye isa Google Fonts webhu mafonti
PacketFence: yakavhurika sosi network kuwana control application
Tamba Nyoka zvakare neGnu / Linux Terminal